मृतक देवरकी श्रीमती मिडियामा, राधाले आफ्नी सासुलाई समेत छाडिनन् (भिडियो हेर्नुहोस) - Microlink Media::News Media Website
शुक्रबार, पुस ३०, २०७८
शुक्रबार, पुस ३०, २०७८ | Friday 14th January 2022
मृतक देवरकी श्रीमती मिडियामा, राधाले आफ्नी सासुलाई समेत छाडिनन् (भिडियो हेर्नुहोस)
दुई भाउजुहरू मिलेर ब’न्चरो प्र’हार गरी आगोले ज’लाएर देवरको ह’त्या ।यो घ’टना हो सल्यान जिल्ला सारदा नगरपालिका ५ रानीकोटको । घ’टना घ’टेको दिन मङ्सिर ९ गते बिहिरवार । त्यो दिन यो घरमा देवर सेरबहादुर चन्द र भाउजु लक्ष्मी मात्र थिए। घरका अन्य सदस्यहरू नेपालगंज गएका थिए। कुपेन्डे दहबाट पुजा गरेको बोकाको टाउको घरमा ल्याईएको थियो। त्यहि बोकाको टाउकोसगँ रक्सि खाने प्लान बनाईयो।
भाउजु लक्ष्मीले त्यो दिन गाउकी एक महिला नाताले देवरानी पर्ने बर्ष २५ कि राधा पैाडेल र अर्का एक जना नाताले देवर पर्ने चुर्न बहादुरलाई पनि खनपिनको लागि घरमै बोलाईन्। सेरबहादुरको बिहे दशैको ४, ५ दिन अघि भएको थियो। दशै मान्न भनि माईत गएकी श्रीमती अहिले मिडियामा आएकी छिन। लक्ष्मीका श्रीमान बिदेश गएका छन्, राधाको श्रीमान घरमै छन् तर उनि अप,ङ्ग छन् ।
राधाको पृष्ठभुमी हेर्ने हो भने केहि बर्ष अधि आफ्नि सासुमा मृत्युको मुख सम्म पुग्ने गरि पिटेकी थिईन्। सोहि कारण सासु र ससुरा अरूकै घरमा सरण लिएर बस्दै आएको देखिन्छ। मलाई मेरो बुहारीले धेरै नै दुख दिएकि हो अहिले उसलाई प्रहरीले लगेकोमा हामीलाई कुनै गुनासो छैन , पहिले देखि नै उसले हामीलाई कु’ट्ने पि’ट्ने हामो कपडा जला’ईदिने काम गर्थी अहिले पाप कराएको छ।
त्यस रात दुई देवर र दुई भाउजुहरू सँगै बसेर खानपनि गरे। रातिको झन्डै ८ बजे तिर कान्छा देवर चुर्न बादुर सुत्न जान्छु भन्दै घरतिर लागे। अब त्यहा ३ जना थिए। दुई भाउजुहरू लक्ष्मी र राधा सँगै देवर सेरबहादुर मात्र। खानपनि अलि अबेर सम्म चल्यो। त्यपछि देवर सेरबहादुर सुत्नकालागि आफ्नो कोठामा गए।
लक्ष्मीले गाउलेलाई र प्र,हरीमा भने अनुसार देवरले पानि माग्नु भो म पानि लिएर देवरको कोठामा गए पानि दिनलाग्दा मलाई समात्नु भो अनि म चि,च्याए र त्यतिकैमा राधा आएर ब,ञ्चरोले हानिन् भनेकिछन्। तर गाउँलेहरू त्यो मान्न तयार छैनन्। मध्यरातमा अर्काको घरमा राखेको बन्चरो राधाले कसरी देखिन् ? सेर बहादुरको सारिरिक अबस्था हेर्ने हो भने उनि सुगरको रोगि भएकाले दुब्लो र कमजोड पनि थिए, त्यसमा पनि रक्सीले मातेको अबस्थामा जो पनि कमजोड नै हुन्छ ।
लक्ष्मिले भनेका कुराहरू पनि एकपछि अर्को फेरिदै आएका छन् । पहिले उनले खानपिन गरेको ठाउमा मारेको भनिन् पछि फेरि त्यसलाई सच्याउदै देवरकै कोठामा मारेको भनिन् । गाउले छरछिमेक हरू लक्ष्मीका कुराहरू मान्न तयार छैनन् उनिहरू भन्छन् सुतिरहेको अबस्थामा बन्चरोले हानेर देवरको ह,,त्या गरिएको हो। अचम्म लाग्ने कुरा त झन के छ भने देवरलाई कोठा भित्र मा’रेर बाहिर ल्याएर ज’लाए।
सरिर पुरै नजलेपछि कपडनाले बेरेर घरमाथि रहेको बासको घारिमा लगेर फाले। मान्छे मारेर मात्र पुगेन उनिहरूले सेरबहादुरको मोबाईल र कागजपत्रहरू पनि जलाई दिए, आखिर के थियो त्यो मोबाईल भित्र ? र के थिए ति ज’लेका कागजहरूमा ? यो घ’टनाको सम्पुर्ण रहस्य त्यही ज’लेको मोबाईल र कागजहरू भित्र लुकेको हुन सक्छ भन्ने देखिन्छ। ह”त्याको पछाडीका कारणहरू जे जे भएपनि लक्ष्मी र राधाले अ’पराध स्व’स्कार गरि सकेकाछन् । पुरा जानकारीको लागी भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस.
यी दुई नातीलाई सँगै लिएर मर्न खोज्दा यस्तो सम्म भयो , हे भगवान यस्तो कसैलाई नहोस् ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )
छोरो जन्माएर रमाले संसार छोडिन् ! रमा घिमिरे र दिपेश कार्कीको नमिठो प्रेमको अन्त्य ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )
होटेलमा काम गर्ने गौरीशाको मनै रुवाउने कथा ! टिकटकमा रियल अभिनय गर्ने गौरीशा नेपाली ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )
जंगलमा छट’पटीएको अवस्थामा भेटिएकी कमला बारे खास बास्तबिकता के ? के उनले बि’ष सेवन गरेकै हुन् ? ( भिडियो सहित हेर्नुहोस)
कडा दोहोरी गाउने फुच्चे जोडीको घर पनि छैन, आमले होटेलमा काम गर्नु हुन्छ, नयाँ कपडा लगाउदा यति खुशी (भिडियो हेर्नुहोस)
देबर भाउजु बिचको सम्बन्ध जब सासुले थाहा पाइन् ! अनि के के भयो ( हेर्नुहोस भिडियो सहित)
सिन्धुली को दुमरीबासमा बुबा आमा भएर पनि २ छोरा को बिजोक...
पछिल्लो समयमा सामाजिक संजाल टिकटक मा एउटा भिडियो धेरै नै चर्चित...
पछिल्लो समय सामाजिक संजाल टिकटक सबैले रुचाएको एप हो। टिकटक को...
मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकास्थित सलकपुरमा बस्दै आएकी एक १९ वर्षीया युवतिको शङ्कास्पद...
समाजिक संजालमा थुप्रै अहिले भाइरल हुने गरेका भेटिन्छन । आफ्नो कला...
सल्यानमा गत असारमा एक जना वृद्ध महिलालाई कर्तव्य गरी ह”त्या गरेको...
अचम्मको जोडी भेटियो… फ्याट फ्याट दोहोरी टुक्का हान्ने ! बाग्लुङ्गमा ( हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
हिजडा कि छोरी भन्दै गाली बेइजती गर्छन्” बुवा नाच्ने भएकाले आफन्तीबाटै बहि’स्कार : प्रितीको कथा (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा धेरै किसिमका प्रतिभा हरु देख्न सकिन्छ। यस...
अर्जुन दास केस फलोअप: आ-रोपित कमल साउदकि आमाले भनिन् मेरो छोराको दोस छैन ! कमलकै घरबाट यो भिडियो
कैलालीमा २५ वर्षीय अर्जुन दासको विभ”त्स ह”त्या भएको छ । जानकी...
कल रेकर्ड सहित अर्जुन दासको बहिनी र आमा मिडियामा, मनोजले कल गर्दै भने टाउको एकातिर शरीर अर्को तिर छ
कैलालीमा युवकको ह’‘त्या ग’रे’को आ’रोपमा एक जना प’क्राउ परेका छन्। जानकी...
© 2022 Microlink Media All right reserved Site By : Himal Creation || सूचना विभाग दर्ता नम्बर= १६९६/०७६-७७